बलिउडका ३ खान शाहरुख , सलमान र अमिर मध्ये को धनी छ ? – OSNepal
बलिउडका ३ खान शाहरुख , सलमान र अमिर मध्ये को धनी छ ?
बलिउडको दुनियाँमा हरेक स्टारले नाम मात्र कमाउँदैन, पैसा पनि कमाउँछन् । तर सलमान खान, शाहरुख खान र आमिर खानले यस उद्योगमा जुन हैसियत कमाएका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । यी तीन खानसँग बलिउडमा फिल्म हिट गर्ने क्षमता छ । तीनै जनाले कलाकारिता बाट धेरै पैसा कमाए । तर के तपाईलाई थाहा छ यी तीन खानमध्ये सबैभन्दा धनी खान को हुन् ? कसको कति पैसा र कति सम्पत्ति ? आज हामी तपाईलाई बताउँछौं कुन खानसँग कति पैसा छ र कति धनी छन् । तीनै खानको सम्पत्ति थाहा पाएपछि थाहा हुन्छ सबैभन्दा धनी को हो
बलिउडका सुल्तान मानिने सलमान खानलाई मानिसहरुले मन पराउने मात्रै नभएर धेरै माया पनि गर्छन् । उनको उदारताको कथा पनि सुनिन्छ । उनी जनतासँग मित्रता मात्र खेल्दैनन्, उनको कारणले लाखौंको सहयोग पनि पाएका छन् । उनको कारणले बलिउडमा धेरै नयाँ अनुहार पनि देखिएका छन् । भारत बाहेक सलमान खानको विदेशमा पनि घर छ । र उनको कुल सम्पत्तिको कुरा गर्दा लगभग २१०मिलियन डलर अर्थात भारु १४८० करोडको सम्पत्ति छ।
भारतका धेरै राज्यहरूमा उनीहरूका घरजग्गा छन्। मुम्बईमा, सलमान आफ्नो परिवारसँग ग्यालेक्सी अपार्टमेन्टमा बस्छन्, जसको मूल्य ११४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। सम्पत्ति बाहेक सलमान खानको कमाईको स्रोत पनि निकै राम्रो छ । फिल्मका अलावा उनले विज्ञापनबाट पनि कमाइ गर्छन् र उनले दस का दम र बिग बोस जस्ता धेरै टिभी कार्यक्रमहरू होस्ट गर्छन्। फिल्म, विज्ञापन र टिभी शो लगायत उनले वर्षमा कम्तिमा २५० देखि ३०० करोड कमाउँछन्। यसबाहेक उनीसँग सवारी साधनको कलेक्सन पनि छ जसमा मर्सिडीज, रोल्स रोयस, भेन्टले र अडी जस्ता धेरै गाडी छन्, जसको मूल्य करिब २८ करोड रुपैयाँ छ ।
बलिउडका बादशाह भनिने शाहरुख खानले सुरुमा आफ्नो पहिचान बनाउन निकै मिहिनेत गरेका थिए । उनले टिभीमा स–साना भूमिकाबाट करियर सुरु गरेका थिए । र आज उनी बलिउडका सबैभन्दा महँगा कलाकारमा गनिन्छन् । उनको कुल सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्दा अनुमान गरेर भन्न नसकिने तर ६०० मिलियन डलर अर्थात ४ हजार ४४० करोडको सम्पत्ति छ । भारत बाहेक दुबई र लण्डनमा पनि विलासी घरहरु छन् । यी विलासी बंगलाहरू बाहेक उनको अलिबागमा एउटा आलिशान फार्महाउस पनि छ।
शाहरुख खान आफ्नो परिवारसँग मुम्बईको ‘मन्नत’ मा बस्छन्, जसको मूल्य करिब २०० करोड रुपैयाँ छ । अलिबागमा २० हजार स्क्वायर मिटरमा बनेको शाहरुखको सपनाको घर कुनै विलासी रिसोर्टभन्दा कम छैन । यो फार्महाउसको लागत २५० करोड रुपैयाँ छ । लण्डनमा बनेको बंगलाको मूल्य करिब २०० करोड भारु रहेको छ । यसै क्रममा शाहरुखले दुबईमा आफ्नो ब्यापार पनि बढाएका छन् भने शाहरुख खानले पनि त्यहाँ सिग्नेचर भिल्ला नामको आफ्नै घर बनाएका छन् ।
८५०० वर्ग फिटमा बनेको सिग्नेचर भिल्ला निकै सुन्दर छ । यस भिलाको मूल्य २० करोड रहेको छ । उनको कमाईको कुरा गर्दा फिल्म र विज्ञापन बाहेक उनको आफ्नै फिल्म प्रोडक्सन हाउस पनि छ । यसबाहेक, उनले ठूला कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्छन्। यसबाहेक आईपीएल खेलमा शाहरुख खानको केकेआर पनि उनको टिम हो । उनको सम्पत्तिमा रोल्स रोयस, मर्सिडीज बेन्ज, बीएमडब्ल्यू, गति भेरोन र अडी जस्ता लिमोजिनका शाही गाडीहरूको संग्रह छ।
बलिउडमा मिस्टर परफेक्शनिस्टको नामले चर्चित आमिर खान यी तीन खानको सूचीमा परेका छन् । आमिरले फिल्मको पारिश्रमिकको सट्टा फिल्मको नाफाको हिस्सा लिन्छन् । आमिरले जुनसुकै फिल्ममा ७० प्रतिशत सेयर लिन्छन, बाँकी ३० मा अरुको सेयर हुन्छ । नेटवार्डियर वेबसाइटको एक रिपोर्टमा आमिर खानसँग १८० मिलियन डलर अर्थात १२६० करोडको सम्पत्ति रहेको छ । यति मात्र होइन, उनको वार्षिक आम्दानी करिब १४७ करोड रहेको छ ।उनको पाँचगनी ९महाराष्ट्र० मा करिब १५ करोडको बंगला छ जुन २ एकड जमिनमा फैलिएको छ ।
यसबाहेक उनको भारतमा २२ वटा घर छन् । विदेशमा रहेको आफ्नो सम्पत्तिको कुरा गर्दा उनले अमेरिकाको बेभर्ली हिल्समा ७५ करोडको बंगला किनेका छन् ।फिल्मका अलावा आमिरले विज्ञापनबाट पनि पैसा कमाउँछन्, उनको आफ्नै प्रोडक्सन हाउस पनि छ । गाडीको सङ्कलनको कुरा गर्दा उनीसँग बीएमडब्लू ७ सिरिज, रेन्ज रोभर, बेन्टले कन्टिनेन्टल फ्लाइङ स्पर, रोल्स रोयस कुप, मर्सिडिज बेन्ज एस ६०० गार्डजस्ता लक्जरी कार छन्, जसको कुल मूल्य २१ करोडभन्दा बढी छ ।